विद्यालयको पाठ्यक्रममा व्यापक फेरबदल, पूर्णांक नै हटाइयो !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
विद्यालयको पाठ्यक्रममा व्यापक फेरबदल, पूर्णांक नै हटाइयो !
काठमाडौं – विद्यालय तहमा अध्यापन गरिँदै आएको अनिवार्य विज्ञान विषयमा प्रविधिलाई पनि थप गरिएको छ ।
आगामी शैक्षिक सत्र २०७७ सालबाट विज्ञान तथा प्रविधि विषय अध्यापन गरिने भएको छ ।
विश्वमा विकास हुँदै गएको प्रविधिबारे विद्यार्थीलाई सिकाउने उद्देश्यले प्रविधि विषय थप गरिएको हो । १९९० सालबाट नेपालमा प्रवेशिका परीक्षाको थालनी भएको हो र त्यो बेला अतिरिक्त विषयका रूपमा साधारण विज्ञान विषय समावेश गरिएको थियो ।
नयाँ शिक्षा लागू भएपछि अनिवार्य विज्ञान विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थियो र २०३१ सालबाट सो विषय प्रवेशिका परीक्षामा समावेश भएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेश भट्टराईले भने, ‘सूचना प्रविधिको युगमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्यले विज्ञान र प्रविधिलाई जोड्ने निर्णय भएको हो ।’ आगामी शैक्षिक सत्र २०७७ सालबाट कक्षा १ र कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू तथा कक्षा ६ मा नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षणका रूपमा लागू गरिँदै छ ।
कक्षा ४ देखि १० सम्म विज्ञान तथा प्रविधि विषयको अध्यापन गरिने छ । आगामी २०८० सालसम्ममा सबै तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइसक्ने छ ।
नयाँ पाठ्यक्रम संरचनाअनुसार अबदेखि पूर्णांकको व्यवस्थालाई हटाइएको छ । नेपालमा आधुनिक शिक्षाको थालनी हुँदादेखि नै पूर्णांकको व्यवस्था थियो ।
अब पूर्णांकलाई विस्थापन गरी क्रेडिट आवर बनाइएको छ । कक्षा ११ र १२ मा हप्तामा २७ घण्टा तथा त्यसभन्दा तल हप्तामा ३२ घण्टाको क्रेडिट आवर कायम गरिएको छ । सबै तहका विद्यार्थीको मूल्यांकन अक्षरांकन पद्धतिमा मात्र गरिने छ ।
नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा १–३ मा नेपाली, अंग्रेजी, मेरो सेरोफेरो र गणित विषयलाई एकीकृत पाठ्यक्रम बनाइएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहले मातृभाषा र स्थानीय विषय तयार गरी हप्ताको पाँच घण्टा अध्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कक्षा ४ देखि ८ को पाठ्यक्रममा मानव मूल्य शिक्षा विषय थप गरिएको छ । हाल कक्षा ४–५ मा नैतिक शिक्षा थिएन भने कक्षा ६–८ मा नैतिक शिक्षाको अध्यापन हुँदै आएको छ । नैतिक शिक्षालाई नै मानव मूल्य शिक्षा बनाइएको हो ।
हाल कक्षा ६–८ मा अध्यापन हुँदै आएको पेशा, व्यवसाय र प्रविधि विषयलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमबाट हटाइएको छ र त्यसलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
कक्षा ९–१० मा अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण विषय हटाइएको छ । अब आठ वटा विषयबाट सात वटामा झारिएको छ । विगतमा रहेको स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरण विषयलाई तीन वटा अलग–अलग विषयमा विभाजन गरी तिनलाई ऐच्छिक विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
‘विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयका रूपमा स्वास्थ्य वा जनसंख्या वा वातावरणमध्ये कुनै एकमध्ये रोज्न सक्ने छन्,’ उनले भने । कक्षा ११ र १२ दुवैमा अनिवार्य नेपाली विषय थप गरिएको छ । यसअघि विभिन्न विषय समूहमध्ये कसैले कक्षा ११ मा र कसैले कक्षा १२ मा नेपाली विषय अध्ययन गर्नुपथ्र्याे । उनका अनुसार कक्षा १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षा समावेश गरिएको छ ।
कक्षा ११ र १२ मा विषय समूहको प्रावधान हटाइएको छ । ‘अब विज्ञान वा व्यवस्थापन वा शिक्षा वा अन्य समूह भनेर भन्न पाइँदैन,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी भट्टराईले भने, ‘आगामी शैक्षिक सत्रबाट एकल पथीय पाठ्यक्रम लागू हुनेछ । ऐच्छिक विषयहरू राखिएका छन् र तीमध्येबाट कुनै तीन वटा छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’